Sawirro: Deni iyo A/Madoobe oo soo gaaray Muqdisho - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Deni iyo A/Madoobe oo soo gaaray Muqdisho
Sawirro: Deni iyo A/Madoobe oo soo gaaray Muqdisho
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo Wafdi uu hoggaaminayo ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya.
Siciid Deni iyo wafdiga la socday waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde kusoo dhaweeyey Wasiiro ka tirsan Xukuumadda Soomaaliya, Xildhibaano, saraakiil iyo masuuliyiin kale oo dowlada ka tirsan.
Madaxweynaha ayaa Muqdisho kaga qeyb galaya Shirka wadatashi ee looga hadlayo dardar gelinta arrimaha doorashadda kaas oo uu icilaamiyey Ra’isulwasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Magaalada Muqdisho waxaa horey usoo gaaray Madaxda maamulada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, waxaa iyana saacadaha soo aadan la filayaa in Muqdisho soo gaaraan madaxda maamulada HirShabelle iyo Galmudug.
Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa goor hore oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, waxaana si weyn loogu soo dhoweeyey garoonka Aadan Cadde.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa noqday madaxweynihii labaad ee soo gaaray Muqdisho, waxaana ka horreeyey madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen.
Shirka Ra’isulwasaare Rooble iyo Madaxda Maamul Goboleedyada uga furmayo Muqdisho ayaa inta badan waxaa looga hadli doonaa hanaanka doorashada iyo qaabka loo wajahaayo kadib markii ay madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ay ka gaareen heshiis rasmi ah.